Iyo Tour de France yadzoka uye iyo yepamutemo app yadzoka kuitevera | IPhone nhau
Iyo Tour de France yadzoka uye iyo yepamutemo app yadzoka kuitevera
Zhizha rakadzoka, iyo Tour de France yadzoka paterevhizheni ye mamirioni avanhu kutenderera pasirese. Nhangemutange inozivikanwa yeFrance yapedza neyakaverengeka uye yatove pakati pedu kupa ratidziro, manzwiro uye muyero wekutambudzika mumakomo marefu, asi zvakare kubva kusangano ravanoda kuti isu tirizadzise nechikumbiro chepamutemo kuti tiite usarasikirwe nechinhu.
2 Zvimwe zvinhu
Zviripachena chikamu chinonyanya kufadza chekushandisa ndicho chinotibvumira kutevera mujaho kurarama chero nguva. Saka isu tinokwanisa kuwana chaiyo kilometre poindi uko kune vamhanyi variko, pamwe neakasiyana data eiyo nhangemutange senge tembiricha, kumhanya kwemhepo (uye negwara), mepu ine nzira inofanirwa kuvharwa, altimetry, nguva dzakarongwa uye zvakare kurongedzwa kwechinguva munguva chaiyo.
Nenzira imwecheteyo yatinogona kuona iyi data kubva danho razvino, isu tinogona kuita zvakafanana (zvine musoro kunze kwedata mhenyu) nematanho akasara akarongwa, uyezve isu tinokwanisa kudzokorora nhanho dzakatokwikwidzana kuti dziongorore zvakaitika zvizere.
Chinhu chega chinogona kunge chisipo ndeye kutaura chaiko kweiyo nhanho, chimwe chinhu chingafadze zvikuru kukwanisa kufamba famba uye kuona zvave kuitika panguva yacho, asi zvinonzwisisika kusiiwa kwekuda vashandi vazhinji kuti vaichengete.
Neraki kushanda zvakakwana, uye mairi, mativi emultimedia uko kwatinogona kutevera mafoto nemavhidhiyo emumhanyi, maratidziro emajezi ese ari mukukakavadzana, rwendo rwakazara rweiyo Rwendo uyezve faira nemumwe nemumwe wevamhanyi nezvikwata ndezvavo.
Padanho rekugadzira, iko kunyorera hakuratidze zvinhu zvitsva nezvakaonekwa mugore rapfuura, izvo kune rimwe divi zvaikwanira kubheja mukuenderera uye vasingade kuisa panjodzi. Zvichida kufamba pamwe nemhedzisiro ye zviso zvehexahedron Inogona kunge isiri iyo yakabudirira kwazvo kana ichangoburwa, asi zvirinani yakanyatsogadziriswa uye haikonzere chero mhando yekudzora mukushandisa kwesicelo.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kunyorera kunosara dzakasununguka zvachose uye kuti vakasarudza kusaisa zvirimo zvakabhadharwa, chimwe chinhu chinogamuchirwa nguva dzese uye chatinofunga chine musoro zvachose muchiitiko chine hunhu hwakafanana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Iyo Tour de France yadzoka uye iyo yepamutemo app yadzoka kuitevera
Kuzvarwa patsva, kunovandudzwa nekuwedzera nhamba hombe yezvinhu zvitsva